तपाइको जीवनको बारेमाएक हप्ता सोच्नुहोस् - एक हप्ता सोच्नुहोस्
तपाई किन जीउनु हुन्छ ? तपाइको यो जीवन पछि के हुन्छ ? हामी तपाईलाई एक हप्ता तपाइको जीवन र भविष्यको ’boutमा सोच्नको निम्ति चुनौती दिन चाहन्छौ ।
परमेश्वर तपाईको भूल गल्ती र अनाज्ञाकारीताहरु क्षमा गर्नुहुन्छ । किनकी येशु ख्रीष्ट प्रतिको तपाईको विश्वासले गर्दा परमेश्वरले तपाईलाई आफ्नो सन्तानको रुपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ । प्रायजसो मानिसहरु परमेश्वरलाई इन्कार गर्छन् ा तर कोही मानिस भने केही त छ भनेर विश्वास गर्छन् तर के हो भनी खोजी गर्दैनन् । अथवा विज्ञानले जीवनको ’boutमा जे देखाएको छ त्यही कुरमा विश्वास गर्छन् । अहिले र यो जीवन पश्चात पनि येशु ख्रीष्ट माथिको विश्वासले मात्र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध सम्भव छ
दिन 1 मा आफ्नो हप्ता सुरू गर्नुहोस्